Nayakhabar.com: बाबुराम भट्टराईले नै पाएनन् काठमाडौंमा डेरा, घरपेटीले उल्टै हप्काए पठाएपछि बाबुरामको यस्तो आक्रोष
बाबुराम भट्टराईले नै पाएनन् काठमाडौंमा डेरा, घरपेटीले उल्टै हप्काए पठाएपछि बाबुरामको यस्तो आक्रोष
काठमाडौं । नेपालको एउटा सर्बोच्च पद सम्हाली सकेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा पत्याउनै नसक्ने अनौठो टुइट गरेका छन्। धेरैलाई आश्चर्य जनक पनि लागेको छ। त्यो पत्याउनै नसक्ने आश्चर्य जनक कुरा के हो भने उहाँ अहिले आफ्नो सानेपा स्थित निवासबाट डेरा सर्ने कोशिसमा हुनुहुन्छ। त्यहि क्रममा उहाँ अनेत्रै डेरा खोज्दै हुनुहुन्छ।
बाबुराम जहाँ जहाँ पनि डेरा खोज्ने हिंडे , त्यहीं त्यहीं डेरा पाउन सकेनन् । उनि अझै डेरा खोजाइमा नै ब्यस्त रहेको र डेरा खोज्न कतिपय ठाउँमा जाँदा त घरबेटीहरुले अपमान समेत गरेर पठाएको खबर बाबुरामले ट्वीटरमा ट्विट गरेका छन् ।
देशमा पूर्व प्रधानमन्त्रीकै हालत यो छ भने अन्य साधारण मानिस डेरा खोज्न जाँदा कस्तो व्यवहार हुँदो हो ? जनताको बाबुराम प्रतिको वितृष्णाको कारणले भएको हो वा सबै डेरा खोज्न जाने संग यस्तै व्यवहार गर्छन् त घरबेटीहरु ? यती बेला यही प्रश्नले काठमाडौंको शहर तातेको छ ।
यसरि दुर्व्यवहार गरेर डेरा खोज्न आउने कै अपमान गर्नु त गलत नै हो । त्यसैले नेपालको शहरिया समाज अब अत्यन्तै निर्दयी बन्दै गएको छ। न यहाँ भावना छ न यहाँ कुनै सम्बेदनानै हरे यो सम्बेदनाहिन शहर कहाँ पुरेर टुंगिने होला अत्यन्तै डर लाग्दो भयानक कहाली लाग्दो स्थिति बन्दै छ।